Argentina English: Top 10 Tips for alibangisa Argentina
Qiniseka ukuthi abe imibhalo siqu ephelele futhi zamanje ngaphambi kokuqala uhambo lwakho. Thina ngikutshele lokho imibhalo kumelwe alethe at amasiko kanye nezinye amathiphu angeziwe wokuvikeleka futhi iseluleko kungaba Umbuso omkhulu.
Ukufaka Argentina kusukela United States, izivakashi, kufanele sibonise kuphela passport yakho. No visa liyadingeka. The ukuhlala obukhulu izinsuku ezingamamashumi ayisishiyagalolunye (90). Uma ufisa, ungakwazi ukudlulisa elinye ihlandla okufanayo uzethula kunoma yiziphi amahhovisi Immigration National ngaphambi umnqamulajuqu original iphela.
Uma bakwamanye amazwe ungakhohlwa ubuze enxuseni ngaphambi kokuhamba.
Khumbula ukuvikela futhi aqaphe kahle passport yakho endaweni ephephile.
Argentina ayidingi lokugoma ethize ukungena ezweni. Nokho, lapho okungekho kanye ukusikisela. Uma bavela emazweni lapho ikholera yellow fever izifo sendawo kumele sibonise isitifiketi sakho yokugoma ngokumelene lezi zifo. The ukusikisela ukuthi uma ezindaweni ehlathini enyakatho Argentina, eduze Iguazu Falls, Kunconywa, kodwa akudingekile, lokugoma ngokumelene yellow fever.
Ukuze izindiza zamazwe omhlaba abavunyelwe ukungena ezweni ngaphandle kokukhokha intela, izingubo, izinto nempahla ezintsha kuze kube umkhawulo u $ s 300 (u $ s 150 izingane ezingaphansi kweminyaka 16). Imikhiqizo bathenga ezitolo khulula (Duty Free Shop) Ukufika, engeza elinye $ s 300 tariff exception.
Pets like izinja namakati, kumele enze inqubo elula ukungena ezweni. Kumele bathumele isitifiketi zempilo ezidingwa izwe lakini ukuze ekhishwa isilwane. Isitifiketi amarabi wokugoma kanye isilwane sakho akufanele at the izimpawu kokuhlolwa noma izimpawu zezifo. Ekugcineni kuphela kudingeka bakhokhe imali encane.
Uma kwenzeke lokhu kubaphazamise ngesikhathi uhambo, nawe kufanele uthintane lendiza wakho noma cruise line. Kodwa uma ukulahlekelwa kwenzeka ngaphakathi sezindiza noma port of entry, kufanele uhambe ngokushesha Airport Security Police (PSA), esihlupha bonke zezindiza kanye namachweba ngendlela izwe.
Major izinkampani eziqashisayo car abakhona in Argentina. Sinenkosi emahhovisi e ezinkulu zezindiza iinhlangano ezifana Alamo, Hertz, Avis futhi akhiwe. Khumbula ukuhlola nge credit card yakho kanye nabamele ezweni lakho ejensi eziqashisayo imoto imininingwane ngohambo lwakho ngaphambi kokuqhubeka. Ukuze ukuhamba ezweni kumele abe international irekhodi ukushayela.
Ungathenga ngokuphepha yendawo yakho emahhovisi ezisemthethweni Bank National elise zezindiza wezwe. Ungakwenza ezindlini izinguquko ezisemthethweni isikhungo sezimali Buenos Aires. Ukuze ugweme izimo ecasulayo musa ukuphendula ohlongozwayo abancane emgwaqweni noma izinhlamvu friendly ukubukeka. Thola iseluleko ngaphambi concierge kwehhotela lakho noma abangane zendawo. Lezi ziphakamiso bamele ingozi eliphezulu abafokazi. The Tourist Ombudsman ungakwazi uzijwayeze amanothi zemali bancane zomthetho Argentina. Credit amakhadi kabanzi yamukelwa American Express, Visa, Diners and Master Card.
Uma ufika country'll ukuthola zezindiza kanye namachweba, various service izivakashi izikhungo wahlela uMnyango Tourism of Argentina. Kukhona abasebenzi izilimi ezimbili uyonihola futhi ahlinzeke amabalazwe kanye nelayelo. Uma uthanda, ungakwazi futhi ushayele line abazinikele izivakashi (0800-555-0016).
The City of Buenos Aires futhi izici Tourist Information Centres (TIC), elise ezindaweni nezindawo kakhulu ezivame izivakashi. Ngamunye esifundazweni kanye ukhangwa has siqu ulwazi isikhungo salo. Unganqikazi ukucela usizo lwakho.
Argentina ufuna izivakashi futhi iqinisekisa ukuphepha kwabo. In the City of Buenos Aires kanye izifundazwe eziningana kuleli zwe, wena ube ejensi kahulumeni abazinikezele ukunakekela okukhethekile ngendlela izivakashi. In Buenos Aires the Tourist Police Station ukubeka onawo a hotline (0800-999-5000), ngaphezu kwamahhovisi ayo central.
Tourist Ombudsman futhi ikunikeza line (4302-7816) kanye namahhovisi eziningana ngokungiphendula sited for abeze enkulu. Ekugcineni, khumbula njalo ukugcina izinto zakho siqu futhi abalulekile ukuze sivikele ngaso sonke isikhathi. Bunake isikhwama sakho futhi ungangabazi ukuya iziphathimandla ezimweni asolisayo.
Lapho uhamba kuba njalo kuyancomeka ukuthi uthathe ikhambo umshwalense eyamukela lwezokwelapha. Kuyindlela ukwengeza ukulondeka uhambo lwakho. Qiniseka ukuqasha inkampani wendawo omethembayo ngaphambi kohambo. Lokhu kweseka kuyokwenzeka wenze ukuhlala kwakho kujabulise kakhudlwana. Nokho, esimeni esiphuthumayo noma yikhanda elula Argentina uyothola okuhle kakhulu izikhungo zokunakekela. Khumbula ukuthi izindleko yokunakekelwa kwezempilo ezimele Argentina ziyafana nalezo ezweni lakini noma Europe. Once the yabadinga usizo lokwelashwa, ungakwazi ahlole Tourist Ombudsman ukuqinisekisa tariff fair.